दुई प्रकारको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ : देवेन्द्र कुँवर/उपाध्यक्ष,अखिल (छैठौं)-Nagarikaawaj.com
दुई प्रकारको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ : देवेन्द्र कुँवर/उपाध्यक्ष,अखिल (छैठौं)
नागरिक आवाज/असाेज २५ बुटवल ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन अखिल (छैठौं) को २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन झापाको विर्तामोडमा आजबाट शुरु भएको छ ।
सम्मेलन २८ गतेसमम चल्नेछ । शैक्षिक निजिकरण, उदारीकरण र संघियता विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन, जनवादी शिक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने नाराका साथ शुरु हुने सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा अखिल (छैठौं)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरसँग नागरिक आवाजका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
सम्मेलनको सबै तयारी पुरा भईसकेको छ । प्रतिनीधि पर्यवेक्षकहरु पनि छनौट गर्ने कामहरु सम्पन्न भएका छन् । प्रचार प्रसार कामहरु पनि भईरहेका छन् ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न गर्नको लागि जनवर्गीय मोर्चाहरुका नेतृत्वका साथिहरु पनि विर्तामोड आउने क्रम जारी छ ।
२६ गते झापाको विर्तामोडमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुने छ ।
शैक्षिक निजिकरण, उदारीकरण र संघियता विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन, जनवादी शिक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने नारा तय गर्नुभाछ, तर-
नेपालमा शिक्षा झन झन निजिकरण भइरहेको छ, मूलूक संघियतामा गइसकेको छ, यो नाराको सार्थकता कसरी छ त ?
नेपाली जनताको लामो समयको संघर्ष पश्चात संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । जुन आशा र भरोषाले जनता आन्दोलन वा संघर्षमा बलिदान गरे तर ति आशा र भरोषा पुरा हुुन सकेनन् ।
आज पनि लाखौंलाख नेपाली युवाहरु विदेशको खाडीमा छन् भने अर्कोतिर गरिबीको कारण शिक्षा हासिल गर्न नसकेका युवाहरु पनि विदेश जान बाध्य छन् । अध्ययन गरेका युवाहरु पनि देशमा आफ्नो योग्यता अनुरुप रोजगार व्यवस्था नहुने स्थिति देखेपछि विदेश जान बाध्य छन् । देशको राष्ट्रियता कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
संघीयताको दुस्परिणामहरु देखा परिरहेका छन् । यस्तो किन भयो भन्ने कुराको मुल कारणमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । आज पनि शैक्षिक असमानता छ । शिक्षामा राज्यले लगानी गर्ने र व्यवहारिक वैज्ञानिक र सर्वसुलभ बनाउने भन्दा पनि कसरी निजिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मा नै तल्लीन छ ।
यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र लगानी गर्नुको साटो कसरी आफु उम्कीन सकिन्छ भनेर राज्य लागि रहेको छ । संघीयताको दुष्परिणाम जनताले अहिले प्रतक्ष्यरुपमा करको माध्यमबाट भोगिरहेका छन् र तसर्थ यी सबै कुराहरुको विश्लेषण गर्दा पनि हाम्रो यो नाराको अत्यन्तै सार्थकता छ ।
मूलूकमा तीन तहको सरकार छ, कम्युनिष्टकै शक्तिशाली सरकार पनि छ, अब तपाईहरुले भनेको जनवादी शिक्षा आउछ त ?
आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरुको चांहि सरकार हो तर सैदान्तिकरुपमा यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार नै हैन । अहिले बनेको सरकारबाट जनवादी शिक्षा प्राप्तीको लागि ठोस प्रकारका कार्यक्रमहरु आउँछन भनेर त हामी लाई विश्वास छैन ।
तर पनि शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकृति विसंगति अन्त्य गर्न कुनै सुधारका योजनाहरु आँउछन भन्ने आशा थियो ।
सरकारका गतिविधिहरु हेर्दा त्यो प्रकारको आशाहरु गर्ने ठाँउ पनि देखिएको छैन ।
संघियता खारेजीको माग सहित भण्डारफोर गर्दै हिँडेको पार्टी निकट तपाईहरु हुनुहुन्छ ? तर सम्मेलन जातीय संघियताको माग गर्ने क्षेत्र पूर्वको झापामा राख्नुभएको छ, यसको सान्दर्भीकता के छ ?
हामी निरन्तर संघीयता विरुद्ध आन्दोलनहरु सञ्चालन ग¥यौं ।
हामी अहिले पनि त्यो आन्दोलनमा छौं । नेपालको पुर्वी क्षेत्र संघीयता त्यसमाथि पनि अझै जातिय संघीयता नै हुनुपर्छ भनेर उग्र प्रकारका आन्दोलनहरु चलेका पक्कै हुन् । त्यसको कारण के हो भने देश संघीयतामा गएपछि सबै प्रकारको अधिकार प्राप्त हुन्छ । सबै समस्याहरु समाधान हुन्छ । संघीयता आएपछि त घरघर मै सिंहदरवार नै आँउछ भनेर भ्रामात्मक रुपमा राजनितिक दलहरुले जनता विच प्रचार गरे । जातिवादी संगठनहरु त झनै उग्र रुपमा नै प्रस्तुत भएर लागेका थिए ।
त्यसको सिकार पुर्वेली सोझा जनताहरु बने । जाती जनजाती विच क्षेत्रक्षेत्र विच विवादको स्थित पैदा हुन थाल्यो । स्थानिय तह प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन भएपछि संघीयताका गलत दुस्परिणामहरु देखापर्न थाले । संघीय व्यवस्था न देशको पक्षमा नत जनताको पक्षमा नै छ भन्ने कुरा बुझेर । त्यसको विरोध गर्न थाले ।
त्यो आवाजलाई बुलन्दित गर्न हामीले पनि पुर्वमा यसप्रकारका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रहरु लैजानु पर्छ भनेर यो सम्मेलनको तय गरेका छौं । सम्मेलनको तयारीको लागि पुर्वी क्षेत्रका जनताहरु साथ सहयोग र समर्थन छ । सबैले यो सम्मेलनलाई धेरै महत्वको दृष्टिले हेरेका छन् । यस कारण पनि यो सान्दर्भिकता र महत्व छ ।
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन शिथिल भएको हो की भन्ने चर्चा छ, संगठनहरु क्रियाशिल नभएर हो की मुद्धा नै सकिएका होलान् ?
०६२÷०६३को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात विद्यार्थी आन्दोलन केहि शिथिल भएको पक्कै हो यस्तो किन भयो भने हामीले आन्दोलनमा साथ दिएका पार्टी नै सत्ताको बागडोर समाल्न पुगे र तिनिहरुले विद्यार्थीको पक्षमा काम गर्छन भन्ने विश्वास थियो ।
यो समय नेपाली जनता र नेपाली विद्यार्थीहरुमा लागि पर्ख र हेर भन्ने नीति लागु भयो । संक्रमणकालिन समय पनि रह्रयो । जसको कारण आन्दोलन शिथिल भयो । तर हाम्रा मुद्धाहरु सकिएकै छैनन् । न यहाँ शैक्षिक समानता छ र न शिक्षा व्यवहारिक वैज्ञानिक र निशुल्क छ । जवसम्म समाजमा विभेद रहन्छ, असमानता रहन्छ र राष्ट्रयता कमजोर हुन्छ तवसम्म हाम्रा आन्दोलन सकिदैनन् । के कुरा सत्य हो भने कहिले आन्दोलन व्यापक रुपमा उठ्ने गर्छ, कहिले मन्द ।
शिक्षा क्षेत्रमा समस्या छन भने समाधान नहुनुको कारण चाँहि के त ?
शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याहरु समाधान नहुनुको मुख्य कारण राजनिति नै हो । समाजिक व्यवस्था जस्तो प्रकारको छ, । राज्यको चरित्र पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ । चरित्र जस्तो प्रकार हुन्छ व्यवहार पनि त्यस्तै हुने गर्दछ । व्यवस्था पुजीवादी चरणमा प्रवेश गर्दै छ यो व्यवस्थाले दुई प्रकारको शिक्षा प्रणाली उत्पन्न भएको हो ।
धन वा पुंजी हुनेहरुले प्राप्त गर्ने शिक्षा र धन वा पुंजीं नहुनेले प्राप्त गर्ने शिक्षा । अहिले धन वा पुंजी हुनेलाई शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान भए जस्तो लाग्छ नहुनेलाई शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान नभए जस्तो लाग्छ । निशुल्क सर्वसुलभ वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा जव सम्म प्राप्त हुन्न तव सम्म यो क्षेत्रका समस्याहरु समाधान हुन्नन् ।
हामीले बुझ्ने कसरी भन्ने हो र हाम्रो बुझाईमा यो क्षेत्रका समस्याहरु समाधान भएका छैनन् र यो व्यवस्थाले गर्न सक्दैन भन्ने नै हो ।
अहिले विद्यार्थी संगठनमा उमेरको हदको कुरा उठिरहेको छ, यसबारे अखिल (छैठौं)को धारणा के छ ?
यो विषयलाई सरल तरिकाले बुझ्दा उमेर हदबन्दी ठिक जस्तो लाग्छ । तर हामीले अलि गहिरो गंभिर रुपमा बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने तरिका अपनायौं भने जति सामन्य लाग्छ त्यति नै जटिल पनि लाग्छ । अध्ययन गर्नको लागि कुनै उमेरको हदबन्दि छैन् ।
यदि त्यसो हो भने कुनै पनि संस्थाको कुनै पनि व्यक्ति साधारण सदस्य हो भने सामन्यतया चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार राख्छ । यो विषयमा व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ ।
२१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले शिक्षा क्षेत्रका के कस्ता बिषयमा छलफल हुन्छ ?
शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति विसंगतीको अन्त्य गर्न, कसरी शिक्षालाई व्यवहार उपयोगी बनाउन सकिन्छ,र शैक्षिक असमानताहरुको अन्त्य गर्न सकिन्छ र समाजमा रहेका विकृति विसंगतिहरुलाई समाजबाट कसरी हटाउन सकिन्छ त्यसको लागि शैक्षिक संस्थामा हाम्रो भुमिका के हुने र त्यो संस्थाको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।
साथै मेडिकल कलेजहरु सबै प्रदेशमा स्थापना गरिनुपर्छ र मेडिकल शिक्षा लगायत प्राविधिक शिक्षालाई पनि सबैको पहुँचमा पु¥याउन राज्यलाई दवाव दिने प्रकारका कार्यक्रमहरु गरिने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
आम विद्यार्थीहरुले के पाउछन त ?
आम विद्यार्थीको हकहित प्राप्तीको लागि हामी निरन्तर संघर्षको मैदानमा नै छौं । सम्मेलनले तत्कालिक रुपमा विद्यार्थी आन्द्योलनको कार्यदिशा तय गर्ने छ ।
सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ, तपाई अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अबको नेतृत्वमा तपाईको चाहना के छ ?
हामीले समाज रुपान्तरणको लागि काम गर्ने हो ।
चाहना भन्दा पनि संगठनको आवश्यकता र प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरु चाहनाले जुन ठाँउमा जिम्मेवारी पाँउछु । त्यो जिम्मेवारीलाई गहन र महत्वपुर्ण तरिकाले पुरा गर्न म तयार छु ।